Widget an'ny HTC-style ho an'ny volanao (Cydia) | Vaovao IPhone
Ireo widgets an'ny HTC-style dia kilasika tsy manam-potoana. Ny fandinihana ireo fanitsakitsahana vaovao niseho tany Cydia tato ho ato dia nahita widgets roa vaovao amin'ity karazana ity aho, ary na dia eo aza ny fomba vaovaon'ny iOS 7 dia lavorary eo amin'ny fantsom-pitaovan'ny fitaovantsika izy ireo, noho izany dia tsy te-hanadino ny fotoana mety aho mamoaka lahatsoratra momba azy ireo. Widget roa ihany koa izany azo alamina mora foana, tsy misy kaody fanovana, misaotra ny menio fikirakirana ampidiriny, ary mila iWidgets apetraka fotsiny izy io.
1 Famantaranandro momba ny toetr'andro HTC iWidget
Famantaranandro momba ny toetr'andro HTC iWidget
Ao ambadik'ity anarana lava ity dia mahita widget mahafinaritra sy maimaim-poana koa isika. Famantaranandro mampiavaka an'i HTC, miaraka amin'ny toetr'andro ankehitriny, ary ny vinavinan'ny 5 andro, izay tsy maintsy ampidirintsika koa ny sarimiaina amin'ny toetr'andro izay miova arakaraka ny toe-javatra ankehitriny. Izy io dia azo ovaina, afaka manafoana ny sary mihetsika na ny faminaniana mandritra ny dimy andro, ary mampiseho ny mari-pana amin'ny degre Celsius. Raha te-hampivoatra ny tanàna ianao dia tsy maintsy mampiditra ny kaody amin'ny fomba "SPXX", izay azonao atao amin'ny pejy Weather.com. Tadiavo ny tanànanao amin'io pejy io ary kopia ny kaody izay hita any amin'ny farany (ho an'ny Granada, ohatra, SPXX0040).
Widget iray hafa manana anarana lava, amin'ity ora fandoavam-bola ity ($ 0,99) ary izany ho setrin'izany dia manolotra antsika 4 amin'ny iray. Widget roa tsy misy fampahalalana momba ny toetr'andro, iray amin'ny fotsy ary iray amin'ny mainty, ary widgets roa miaraka amin'ny toetr'andro ankehitriny, ary koa amin'ny loko mainty sy fotsy. Tahaka ireo teo aloha, izy ireo dia azo alamina, saingy misy safidy bebe kokoa. Ny fahafaha-misafidy ny fiteny sy ny fampiasana ny toeran'ny GPS no tena tsy itovizany amin'ilay teo aloha. Raha te hampiasa toerana voafetra ianao dia esory ny GPS ary ampidiro ny kaody tanànanao, fa hafa indray mandeha. Tsy maintsy mampiasa ny kaody ny Yahoo, koa amin'ny faran'ny adiresy internet rehefa miditra amin'ny tanànanao amin'ny motera fikarohana anao.
Tadidio fa tsy maintsy apetraka koa izy io iWidgets. Raha hametraka ireo widgets, rehefa tafapetraka indray mandeha, tsindrio ny habaka banga eo amin'ny solaitrabe ary atsangano vetivety. Hiseho ny menio iray izay tsy maintsy safidinao ny widget, ary hiseho ny efijery fikirakirana avy eo. Raha te hifindra na hanala ny widget dia tokony hataonao toy ny manala rindranasa.
Fanazavana fanampiny - iWidgets dia mitondra ny Widgets amin'ny lohataona (Cydia) anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Widget an'ny HTC-style ho an'ny volanao (Cydia)
Tsy mahazo na inona na inona mihitsy aho apetrako ny SPXX sy ny isa ary tsy mifandray amiko izany, inona no tokony hataoko?
domel999 dia hoy izy:
Valiny amin'ny domel999
Dismon dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara. Misaotra
Mamaly an'i Desmon
raha tsy noho io karazana zavatra io miaraka amin'i Cydia ... ny iOS dia ho mankaleo kokoa noho ny fampakaram-bady roa ....
Ho ela velona i Cydia .... Fuck Apple, ferana maro!
Fermintxo95 dia hoy izy:
Salama tsara !! Eny, nanandrana tamin'ny Zip Code sy tamin'ny WeatherCode tanànan'ny tanànako aho, ary ny marina dia tsy mandeha amiko izany fa mitoetra ho "banga", ny fotoana fotsiny no azoko. Raha misy olona afaka manampy ahy, ny tanànako dia Alfaro (Espana); Misaotra mialoha. 🙂
Mamaly an'i Fermintxo95
Asafa dia hoy izy:
Salama, tsara be, fa tsy hitako ny kaody spxx firenena. Avy any Mexico City aho. Manantena aho fa afaka manampy ahy hahazo izany ianao, misaotra.
Mamaly an'i Asaf
jlsoler dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray fotsiny, azo atao ve ny mametraka azy eo amin'ny efijery an-trano, satria manarona ireo sary masina rehetra izy.
Mamaly an'i jlsoler
Mat dia hoy izy:
Raha te hanao fahirano ianao dia mila ampidino ny IBLANK avy amin'ny cydia izay mamorona kisary banga mba tsy hosaronan'ny hafa ok
Mamaly an'i Mat
Ary misaotra anao koa Mat.
Salama jlsoler; araka ny lazain'i Mat anao, manana iBlank ianao hamoronana sary masina mangarahara. Tiako kokoa i Gridlock, izay ny ataony dia ny mametraka ny sarin'ireo fampiharana amin'ny toerana tadiavinao, mamela ireo toerana ilainao.
Na ny iray safidy tsara.
Mikasika ilay fanovana dia tena tsara izy ireo, saingy ho an'ny iOS 7, raha ny fahitako azy dia somary tsy mifanaraka amin'ny estetika an'ity rafitra miasa ity izany. Moa ve tsy misy flipclock na zavatra hafa toa ny iOS 7?
Misaotra betsaka Jorge.
loripitu dia hoy izy:
Azonao atao ny maka ny kaody eto an-tanàna:
Ary ao amin'ny Widget dia tokony apetrakao: SPXX0111 ho an'i Mérida (Extremadura)
Fa misy ny sasany tsy misy, ohatra, nitady an'i Alfaro aho fa tsy hita.
Vahaolana iray hafa ny mankany http://espanol.weather.com ary eo dia tadiavo ny tanànanao, raha vao hitanao izy, jereo ny faran'ny adiresy miseho ao amin'ny tranokala ary ho hitanao ny kaody, ohatra Alfaro dia: SPLO0056
Mamaly an'i loripitu
http://edg3.co.uk/snippets/weather-location-codes/ MISY CODES
Fernando Polo (@lalodois) dia hoy izy:
Fa maninona aho no mahazo "HTTP / 1.1 404 Tsy hita" ho an'ny tsirairay amin'ireo rakitra roa?
Valiny tamin'i Fernando Polo (@lalodois)
Aiza no tsy maintsy apetrakao ny kaody tanàna ???
IQTELL, mihoatra ny mpitantana asa tsotra fotsiny